Winpal: mpanonta marika marobe sy mpanonta fandraisana, mpanonta Oem Wifi
PRINTER REHETRA 3 INCH
PRINTER REHETRA 2 INCH
WPB200 4 ″ Mpanoratra marika
WP-T3A 4 ″ Mpanoratra marika
WP300A 4 ″ Mpanoratra Thermal
WPLB80 80mm Fanontam-pirinty mafana
Printer WP80B 80mm Thermal Lable
WP80L 3 ″ Mpanoratra mari-pamantarana mafana
WPLB58 58mm Fanontam-pirinty mafana
WP300W 3. Mpanonta fandraisana
WP260 80MM mpanonta fandraisana
WP230C 80mm mpanonta fandraisana
WP260K 80mm mpanonta fandraisana
WP230F 80mm mpanonta fandraisana
WPCB58 58mm mpanonta fandraisana
WP-T2A 58mm mpanonta fandraisana
WP-T3K 58mm mpanonta fandraisana
WPB58 58mm mpanonta fandraisana
WP-T2C 58mm mpanonta fandraisana
WP-T2B 58mm Fanontam-pirinty maharitra
WP-Q2A 2inch Fanontam-pirinty Thermal Lable
Mifandraisa amin'ny mpanjifa mba hanangonana ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ny injeniera dia namolavola ny endrika ary nanamafy izany tamin'ny mpanjifa. Raha ilaina ny fanitsiana dia hanova sy hanamafy izany ny injenieranay.
Famolavolana sy fanamboarana motherboard
Ny santionany dia hatao aorian'ny nahazoantsika fahazoan-dàlana ary nohamafisina ny endrika.
Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena ary nahazo mari-pahaizana CCC, CE, FCC, Rohs, BIS ho fiarovana. Ny mpiasanay dia manana mpiasa maherin'ny 700 sy teknisiana 30 R&D. Ny tsipika famokarana sy ny sampana fanaraha-maso efa ampy fitaovana dia afaka mifehy tsara ny ambany ny tahan'ny mpanonta latsaky ny 0.3% .Vokatry ny vokatra sy ny vokatra azo itokisana avo dia afaka manome serivisy OEM sy ODM ho an'ny fangatahan'ny mpanjifa samihafa izahay ary mahafaly ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Amin'izao fotoana izao, ny mpanonta mafana dia be mpampiasa kokoa, ary koa manana asa bebe kokoa. Ka iza amin'ireo mpanonta hafanana no mety aminao? Betsaka ny karazana sy ny asan'ny mpanonta eny an-tsena ho an'ny safidinao, ny sasany amin'ny tapakila fanontana, ny sasany amin'ny marika fanontana, ary ny sasany ...
Inona no tokony hataontsika rehefa mitazona pirinty mafana tsy miova ny mpanonta barcode
Rehefa mampiasa mpanonta kaody fanaovana pirinty dia manaova pirinty ny taratasy tsy misy fangarony ity olana ity dia olana mahazatra. Indrindra ao amin'ny mpanonta barcode taorian'ny nanovana ny taratasy misy fehikibo na fehikibo karbonina, ny mpanonta barcode dia mora be mitsambikina tranga na olan'ny taratasy banga maro, ary ...
1. Ny fitsipiky ny fiasan'ny mpanonta barcode Barcode mpanonta dia azo zaraina ho fomba fanontana roa: fanontana mivantana mivantana sy fanontana hafanana. (1) Fanontam-pirinty mivantana mivantana dia entina ilazana ny hafanana vokarina rehefa hafana ny lohany, izay afindra amin'ny taratasy mafana ...
Ny tantaram-pivoaran'ny mpanonta sy ny teknolojia fanontana ankehitriny
Ny tantaran'ny mpanonta dia tantaran'ny teknolojia avo lenta sy indostria ihany koa. Hatramin'ny taona 1970, nipoitra ny teknolojia laser, inkjet, fanontana hafanana ary teknolojia fanontana tsy misy akony hafa. Ny fomba fandraketana hafanana an'ny loha pirinty dia be mpampiasa tamin'ny fax mach ...
Printer mpanovo, Printer finday, 80mm mpanonta fandraisana, Fanontam-pirinty Thermal, Fanontam-pirinty fandraisam-peo 80mm, Printer misy Wifi,